Tijaabada & Qiyaasta - Pandawill Technology Co., Ltd.
Wadarta xakamaynta nidaamka iyo dulqaad yaraanta ayaa si weyn muhiim ugu ah tiknoolajiyad kasta oo cabbiraaddu tahay shaqada wax soo saarka asaasiga ah.
Dhammaan guddiyada wareegga ee ay soosaaraan Circuits-ka pandawill waxaa loo soo bandhigi karaa heerarka IPC Class 2 ama 3, laakiin waxaa taas ka sii muhiimsan, pandawill waxay adeegsaneysaa kontaroolada dulqaadka adkeeya ee heerka si loo hubiyo in dhammaan alaabooyinka la keenay ay bixiyaan joogtaynta cabirka jirka iyo waxqabadka elektarooniga.
Qeexitaannada IPC waxay mararka qaarkood noqon karaan kuwo si ballaadhan oo ballaadhan u cafiyi kara soo saaridda guddiyada wareegga, laakiin farqiga u dhexeeya dulqaadka sare iyo hoose wuxuu noqon karaa gobolka 20% khilaafaad. pandawill waxay dareemi doontaa in tani si fudud aan loo xakamayn karin oo gebi ahaanba laga hortagi karo haddii taxaddar ku habboon la qaato marka la dooranayo alaabta ceeriin iyo soosaarida PCB-yada lakabyada badan leh.
Guddi kasta oo wareeg ah oo ay bixiso Pandawill Circuit, waxaan ku siineynaa dhowr bog warbixin tayo leh oo dhameystiran oo muujineysa dhammaan cabirka jirka, agabka, qoto dheerida iyo geedi socodka xaqiijinta.
Looxyada sidoo kale waxaa la siiyaa qayb iskutallaab ah haddii loo baahdo si loo muujiyo waxqabadka lakabka iyo waxqabadka dahaadhka gudaha, iyo muunad la iibin karo oo tilmaamaysa waxqabadka qoynta ee dhammaadka la iibin karo iyo u adkaysiga PCB ee delamination.
Dufcaddii ugu horreysay ee la keeno waxaa lagu sameyn doonaa kormeer labaad xafiiska pandawill Circuits iyadoo baakad kasta lagu calaamadeeyo astaanteena markii la oggolaado.